IntenseDebate - salokya
salokya's comment stream
Connect with salokya
salokya has not added any external profiles yet.
salokya is not following anybody.
8 comments posted ·7followers · following 0
12 years ago @ Mysansar - प्रचण्ड ... · 1 reply ·0points
धन्यवाद स्वास्थ्य चिन्ताका लागि,
तपाईँ केको डक्टर हो त थाहा भएन तर हाम्रा डक्टर भने यसो भन्छन् सिजनल फ्लु वा स्वाइन नै भएपनि सामान्य अवस्थामा जाँच्न पर्दैन, औषधी पनि खानुपर्दैन।' आयोजनाका उपनिर्देशक डा.जितेन्द्रमान श्रेष्ठले भने। डा.श्रेष्ठले धेरैदिनसम्म निको नभए, गर्भवती पाँचवर्ष मुनि र ६५ वर्षमाथि, गर्भवती महिला, फोक्सो, मुटु, र्मिगौला, मधुमेह, नसा सम्बन्धी र क्यान्सरका रोगीलाई टाँमी फ्लु नामक औषधी दिने तर परीक्षण भने जरुरी नहुने बताए।
स्वास प्रश्वासमा अप्ठेरो हुने, छाती दुख्ने, चिच्चिडाहट हुने, ब्लड प्रेसर एकदमै कम हृुने खान मन नलाग्ने, मुखबाट रगत आउने भएमा तुरुन्तै जाँच गर्ने र अस्पतालमा भर्ना नै गर्नुपर्छ ' अर्का सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.मानसकुमार बनर्जीले भने।
12 years ago @ Mysansar - प्रचण्ड ... ·3replies · +1 points
आक्रोश जथाभावी नपोखौँ, व्यक्तिगत रुपमा गालीगलौजमा नउत्रौँ। सभ्य भाषा र सभ्य तर्कका साथ पनि बहस गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामीले जोड दिउँ, हुन्न ?
12 years ago @ Mysansar - पशुपतिम�... ·0replies · +1 points
बढी एक्सपोजर दिँदा यस्तो विभत्स देखिएकोले कम एक्सपोजरमा नै नदीमा प्रकाशको छायाँ खोजिहिँडेको थिएँ
12 years ago @ Mysansar - पात्रहर�... ·0replies ·0points
तारा जी हैन लारा जी हो :)
12 years ago @ Mysansar - दिनभर स्... ·0replies · +1 points
गुगल क्रोमबाट योभन्दा लामो कमेन्ट लिएन। योभन्दा लामो कमेन्ट गर्नुपर्‍यो भने यसरी रिप्लाइ गर्दा मात्र हुने देखियो।
12 years ago @ Mysansar - दिनभर स्... · 1 reply · +2 points
कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। खखकतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको। कतिसम्म लामो कमेन्ट लिनसक्छ भनी टेस्ट गरेको।
12 years ago @ Mysansar - अब कमेन्... ·0replies · +1 points
send at news@mysansar.com
12 years ago @ Mysansar - आन्दोलन ... ·3replies · +4 points
हामी त्यसलाई राम्रो बनाउने प्रयासमा छौँ। केही दिनमा नै तपाईँले नेपालीमा कमेन्ट गर्न अझ सहज पाउनु हुनेछ। धन्यवाद प्रतिक्रियाका लागि।